May 2018 – TPEC
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo kulan la qaatay xubno ka socday Guddiga Doorashooyinka Qaranka
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa xafiiskooda Garoowe ku qaabilay xubno kasocday Guddiga Doorashooyinka Qaranka Soomaaliya. TPEC iyo xubnaha ka socday Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaa kawada hadlay arrimo ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa wada-shaqaynta labada dhinac. Xubnahan ayaa sidoo kale hordhac u ah Waftiga guddigaas katirsan oo dhawaan imaan doona Puntland, kuwaasoo …
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo kulan la qaatay xubno ka socday Guddiga Doorashooyinka Qaranka Read More »
Guddoomiyaha TPEC oo la kulmay Mayarka Minneapolis iyo Jaaliyadda Puntland ee Maraykanka
Leave a Comment	/ English News / By admin
Gudoomiyaha Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka puntland Mudane Cabdiraxman Diiriye Samatar oo mudooyinkii dambe ku sugnaa dalka Maraykanka ayaa la kulmay madax kala duwan iyo Jaaliyadda Puntland ee dalkaas ku sugan. Guddoomiyaha ayaa Maraykanka u tegay arrimo shoqo oo la xiriira taaba gelinta nidaamka xisbiyada badan ee Puntland iyo sidii dalku uu u gaari lahaa …
Guddoomiyaha TPEC oo la kulmay Mayarka Minneapolis iyo Jaaliyadda Puntland ee Maraykanka Read More »
Tababar u soo xirmay Guddiga iyo Shaqaalaha TPEC [Muuqaal+Sawirro]
Waxaa maanta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kusoo gaba-gaboobay tababar muddo shan cisho ah u socday Guddiga iyo Shaqaalaha TPEC. Tababarkan ayaa kor loogu qaadayay aqoonta guddiga iyo shaqaalaha, sidoo kale waxaa si khaas ah loogu lafa-guray qorshaha iyo sharciga Diinwaangalinta cod-bixyaha, waxaana la isku raacay qabyo-qoraalkii 1aad oo loo saaray guddi diyaariya. Aqoon is-weydaarsigan …
Tababar u soo xirmay Guddiga iyo Shaqaalaha TPEC [Muuqaal+Sawirro] Read More »
Tababar u furmay Guddiga iyo Shaqaalaha TPEC [Sawirro+Muuqaal]
Waxaa maanta magaalada Garoowe tababar uga furmay Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo howlwadeenadooda, kaasoo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo fahamsiinta bulshada qaabka diiwaangalinta. Tababarkan oo ay bixinaysay hay’adda Safer-world oo wada-shaqayn la leh guddiga ayaa socon doona muddo 5 cisho ah. Ismaaciil Ibraahim oo ka socday hay’adda Safer-world ayaa sheegay in aqoon is-weydaarsigan oo la xariiro …
Tababar u furmay Guddiga iyo Shaqaalaha TPEC [Sawirro+Muuqaal] Read More »
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay madax ka socotay Midowga Yurub
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland ayaa magaalada Garoowe kula kulmay madax ka socotay Midowga Yurub. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo halka uu marayo hannaanka dimuqraadiyadda Puntland. Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga ahna ku simaha Guddoomiyaha Maxamuud Soofe, ayaa xubnaha ka socday EU-da uga waramay waxyaabaha u qabsoomay, wuxuuna tilmaamay inuu meel wanaagsan marayo …
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay madax ka socotay Midowga Yurub Read More »